Onwe gị obi ụtọ na Spotify Radio n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla e
Part 1.How na-ege ntị na Windows
Part 2.How na-ege ntị na Mac
Part 3.How na-ege ntị na iPhone
Part 4.How na-ege ntị na iPad
Part 5.How na-ege ntị na Android
Part 6.Here bụ ụfọdụ n'ime ọrụ nke Spotify Radio na ihe ha na-eme
Download Spotify music free na TunesGo na-ege ntị n'oge ọ bụla n'ebe ọ bụla
1. Olee na-ege ntị na Windows
Spotify music gụgharia ọrụ nwekwara a redio maara dị ka Spotify Radio. The Spotify Radio dị 24/7 na ọ bụ dị ka ezigbo redio na-enye gị na-achọpụta nnọọ mma music. Ị nwere ike ịmepụta na gị onwe gị mebere redio na nka, songs na Genres eweta ahaziri redio ahụmahụ gị. Redio na-enye ohere na-akparaghị ókè skips ekwe ka ị na-akara nke ihe ị chọrọ ịnụ na mgbe ị chọrọ ịnụ ya.
The Spotify redio na-ike na niile Spotify ngwa. Ị nwere ike ịnweta Spotify redio na ekwentị gị, laptọọpụ, mbadamba na niile na ngwaọrụ ndị ọzọ na-akwado Spotify égwu. Ọrụ adịghị mkpa na a iche iche ngwa ma ọ bụ software maka Spotify Radio.
Mgbe ịbanye elu, na nbudata na wụnye Spotify ngwa si Spotify website, na-emeghe Spotify software na gị Windows kọmputa.
Site n'aka ekpe n'akụkụ nke Spotify ngwa, pịa na "Radio"
Na-esote ihuenyo, pịa New Station ka ịgbakwunye ụgbọ na ị chọrọ ige ntị na profaịlụ gị.
Ọzọ, tinye aha nke a track, ọgụ egwu ma ọ playlist ị chọrọ tinye gị na redio na họrọ ya si search results.
Na ọ bụ; ị na-eme na ọhụrụ gị na ojii. Ị nwere ike ịmepụta ruo 20 ụgbọ na-ege ntị na oge.
2.How na-ege ntị na Mac
Spotify Radio bụkwa dị na Mac OS na nwere yiri mode nke ime na atụmatụ dị ka nke Windows.
Debanye, ibudata na wụnye Spotify ngwa n'ihi na Mac OS si Spotify website, na-emeghe Spotify software na gị Mac.
Site n'aka ekpe n'akụkụ nke Spotify ngwa, pịa na "Radio".
Ị nwere ike ugbu a Spotify Radio na gị Mac. Ị nwere ike ịmepụta ruo 20 ụgbọ na-ege ntị na oge.
3. Olee otú ige ntị na iPhone
Na-ege ntị Spotify Radio na gị iPhone,
Download Spotify ngwa n'ihi na iPhone si Apple App Store.
Mepee ebudatara Spotify App na banye elu ma ọ bụ banye na akaụntụ gị.
Kpatụ menu na-ekpe top ebiet gị na ihuenyo.
Site nhọrọ nyere mgbata on 'Radio'.
Iji tinye ụgbọ gị Spotify ngwa na iPhone, enweta 'New Station' button.
Tinye aha a track, ọgụ egwu ma ọ playlist ị chọrọ tinye gị na redio na họrọ ya si search results.
Ị nwere ike ugbu a Spotify Radio na gị iPhone. Ọzọ, ị nwere ike ịmepụta ruo 20 ụgbọ na-ege ntị na oge.
4.How na-ege ntị na iPad
Na-ege ntị Spotify Radio na gị iPad;
Download Spotify ngwa n'ihi na iPad si Apple App Store.
Mepee ebudatara Spotify App na debanyere (ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu akaụntụ) ma ọ bụ banye na akaụntụ gị.
Site nhọrọ nyere, enweta on 'Radio'.
Iji tinye ojii gị Spotify ngwa na iPad, enweta 'New ojii' button.
Ị nwere ike ugbu a Spotify Radio na gị iPad. Ị nwere ike ịmepụta ruo 20 ụgbọ na-ege ntị na oge.
5.How na-ege ntị na Android
Na-ege ntị Spotify Radio na gị android ngwaọrụ;
Download Spotify ngwa n'ihi na gị Android ngwaọrụ site na Google Play Store.
Site nhọrọ nyere mgbata 'Radio'.
Iji tinye ojii gị Spotify ngwa na gị android ngwaọrụ, enweta 'New ojii' button.
Ị nwere ike ugbu a Spotify Radio na gị android ngwaọrụ. Ị nwere ike ịmepụta ruo 20 ụgbọ na-ege ntị na oge.
6. Lee ụfọdụ nke ọrụ nke Spotify Radio na ihe ha na-eme
Ọzọ Button: tapping ma ọ bụ ịpị a bọtịnụ ga Ikwu na egwu ọzọ.
Ịmeela / ala: Jiri ịmeela ma ọ bụ isi mkpịsị aka ala ka Spotify na-ahụ zuru okè music egwuregwu n'ihi na gị.
Hichapụ achọghị Station: Ka ihichapụ ụgbọ ị na-achọghị, nanị pịa na X na-egosi mgbe ị hover n'elu ojii.
Ọ bụ ezie na Spotify Radio bụ oké redio n'ihi na ọrụ, ọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke skips maka free ọrụ. Free ọrụ na-ekwe ka ikwu nanị ugboro 6 kwa awa na-ahapụ ha ka ha na-ege ntị bụla na-abịa ụzọ ha ma ha na-amasị ya ma ọ bụ mgbe ndị adịchaghị ọrụ nwere ike ikwu dị ka ọtụtụ ugboro dị ka ha chọrọ.
> Resource> Spotify> onwe gị obi ụtọ na Spotify Radio n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla